चिरञ्जीवी घिमिरे दमक
२०७७ चैत २९ आइतबार ०५:५४:००
चिरञ्जीवी घिमिरे, दमक
दमक– ७ स्थित सुकुम्बासी बस्ती पञ्चमुखी टोलकी धनमाया विश्वकर्मा शनिबार राति सुत्ने तरखरमा थिइन् । उनका लागि ओत लाग्ने छानो आकाश र सुत्नका लागि धरतीको डसना थियो । खुला आकाश उनको वासस्थान बनेको दुई दिन भयो ।
तर, मेयर ओली भने त्यहाँका कोही पनि सुकुम्बासी नभएको दाबी गर्छन् । ‘सुकुम्बासीलाई त नगरपालिकाले गत साल नै घर दियो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू सुकुम्बासी होइनन् । घर जान्छन् नि !’
घर भत्काएपछि सुकुम्बासी बालबालिकाको बिजोग भएको छ । आफ्नो घर किन भत्कियो भनेर थाहासमेत नपाएका बालबालिकाले न समयमा खान पाएका छन् न त राम्रो ओछ्यानमा सुत्न नै पाएका छन् । ‘केटाकेटीले खान माग्छन् । हामीले के दिने ? सबै नगरपालिकाले लगिदियो,’ सुकुम्बासी ठगमाया राई भन्छिन्, ‘रातभर सुत्न सकेका छैनन् । हाम्रो घर किन भत्कियो भनेर सोध्छन्, हामीले के उत्तर दिने ?’
बालबालिकाको विद्यालय लागिरहेको छ । तर, उनीहरूको पोसाक, किताब कहाँ छन् थाहा छैन । ‘अब केटाकेटीलाई कसरी स्कुल पठाउने ? उनीहरूको किताब कहाँ पुग्यो,’ सुकुम्बासी मुना सम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘केटाकेटीको स्कुल पनि बिग्रिने भयो । नगरपालिकाले नानीहरूका लागि त सोच्नुपर्छ नि !’
सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र दमक नगर समितिले आपत्ति जनाएको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नारा लिएको कम्युनिस्ट सरकारले सुकुम्बासीमाथि प्रहार गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो ।